Computers | BCAL
ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာကို အမှီလိုက်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ပြူတာသင်တန်းများ၊ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းသင်တန်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အဖွဲ့များအတွက် တစ်ဦးချင်းသင်တန်းများကိုပင် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်လေ့လာရန် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများရှိသည်။
သင်က အခုမှစလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ကွန်ပြူတာအလုပ်လုပ်ပုံကို ပိုနားလည်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အစပျိုးမှုပါပဲ။
ဒီသင်တန်းက မိတ်ဆက်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို...
Windows 10 ကိုအသုံးပြုခြင်း။
စာရွက်စာတမ်းများကို Word ဖြင့် စာရိုက်ခြင်း။
Excel ဖြင့် စာရင်းဇယားများ ပြုလုပ်ခြင်း။
6 x တနင်္လာနေ့၊
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ – မတ် ၂၈
နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃း၃၀ ထိ
ကုန်ကျစရိတ်- $70 ($60 conc.)
Office Skills များအတွက် ကွန်ပျူတာများ
Microsoft Office ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နိဒါန်းတစ်ခုသည် ရုံးအခြေအနေတစ်ခုတွင် အဖြစ်အများဆုံး အလုပ်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သင်တန်းကာလတစ်ခုလျှင် နှစ်ပတ်ပါဝင်ပါသည်။
Microsoft Word (ဖေဖော်ဝါရီ ၉ နှင့် ၁၆)
Zoom & အီးမေးလ် (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ နှင့် မတ်လ ၂ ရက်)
Microsoft PowerPoint မတ်လ (၉ နှင့် ၁၆)
Microsoft Excel မတ်လ (၂၃ နှင့် ၃၀ ရက်)
Zoom အစည်းအဝေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ယူနစ်အသစ် ပါဝင်သည်။
8 x ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ - မတ်လ ၃၀
နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
ကုန်ကျစရိတ်- $120 ($100 conc.)
တစ်ဦးချင်းယူနစ်တစ်ခုလျှင် $40 ရရှိနိုင်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သင်ယူလိုသူ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုနှင့် လက်တစ်ကမ်းအလိုရှိသူတိုင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများ၏ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် သင့်မေးခွန်းများကို ဘီလ်က လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နေပြီးသား ကွန်ပြူတာ ဘာသာရပ်ကို အမီလိုက်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။
ညနေ ၅း၃၀ မှ ၇း၀၀ ထိ
ကျူရှင်ဆရာ- Bill Steet
ကုန်ကျစရိတ်- စက်ရှင်တစ်ခုလျှင် $5
နည်းပညာကလပ် | ချိတ်ဆက်ပါ။
Federal Government's Be Connected ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် တင်ပြထားသည့် အဆိုပါ အခမဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်း၊ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်း၊ အွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးနှင့် အခြားအရာများစွာ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
နေ့လည် ၁း၀၀ မှ ၃း၀၀ နာရီ